Welcome to Fine Arts Department | Fine Arts Department
Asean- China Cultural Exchange Years 2014 Closing ceremony
မဟာဗုဒၶ၀င္ေလးေတာ္တင္ခန္း ဇာတ္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ ပေဒသာကပြဲ
ျမန္မာ့အကအေျခခံကဗ်ာလြတ္အက ဆင့္ပြားနည္းျပသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၄) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား
32nd ASEANPOL CONFERENCE
Welcome to Fine Arts Department
ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအေးမြင့်ကြူ မြန်မာအက အခြေခံကဗျာလွတ်သင်တန်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း မေလ(၂၄)ရက် ၊ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေတောင်ကြား(၁)ရပ်ကွက်၊ကမ္ဘာအေးစေတီ လမ်း အမှတ်(၁၃၁)၊ အနုပညာဦးစီးဌာန၊ အနုပညာအထက်တန်းကျောင်း(ရန်ကုန်)တွင် ဖွင့်လှစ်လျှက်ရှိသော မြန်မာအကအ‌ြခေခံကဗျာလွတ်သင်တန်းသို့ သွားရောက်ပြီးသင်ကြား ပေးနေမှုအခြေအနေများကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကာ တက်ရောက်သူများအား
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်း (၂၁)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ တိုင်းရင်းသားတို့၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အဆို၊ အက၊ အရေး၊ အတီး ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်
တစ်မျိုးသားလုံး၏ အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ် ပိုမိုတိုးတက် ဖြစ်ထွန်းစေရေး၊ အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ် မြင့်မားရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားတို့၏ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာ အမွေအနှစ်များ အမျိုးသားရေး လက္ခဏာများ မပျောက်ပျက်စေရန် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် မြှင့်တင်ရေး၊ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ် ထာဝရ ရှင်သန် ထက်မြက်ရေး၊ တိုင်းရင်းသားတို့၏
၂၀၁၅ ခုနှစ်(၂၁) ကြိမ်မြောက် မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအဆို၊အက၊အရေး၊အတီးပြိုင်ပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး(၂၄.၄.၂၀၁၅)
၂၀၁၅ ခုနှစ်(၂၁) ကြိမ်မြောက် မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအဆို၊အက၊အရေး၊အတီးပြိုင်ပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို (၂၄.၄.၂၀၁၅) ရက်နေ့
မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အဆို၊အက၊အရေး၊အတီး ပြိုင်ပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး နေပြည်တော် ၊ ၆.၄.၂၀၁၅
မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အဆို၊အက၊အရေး၊အတီး ပြိုင်ပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ
ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဉက္ကဋ္ဌ H.E Mr. Kang Chang-hee ခေါင်း ဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၂)ရက်နေ့တွင် လွှတ်တော်ဝင်း Banquet Hall ၌ ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံ
ဗီယက်နမ် ပြည်သူ့ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာကျုံးသန်းစင်နှင့် ဇနီး မစ္စမိုင်သီဟိုက် ခေါင်းဆောင်သော ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား (၂၉.၁၁.၂၀၁၂)ရက်နေ့တွင် သမ္မတအိမ်တော်၌ ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံ
နယူးဇီလန် ဝန်ကြီး ချုပ် မစ္စတာဂျွန်ကီး ခေါင်းဆောင်သော ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား (၂၂.၁၁.၂၀၁၂)ရက်နေ့တွင် သမ္မတအိမ်တော်၌ ဂုဏ်ပြုနေ့လယ်စာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံ
လေ့ကျင့်ရေး၊ သုတေသနနှင့် ပြည်ပဆက်ဆံရေးဌာနခွဲ
အမျိုးသား ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာ တက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)
အမျိုးသား ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာ တက္ကသိုလ် (မန္တလေး)
စတင်တည်ထောင်သည့်နှစ် - ၁၉၅၂ ခု
တည်နေရာ - အမှတ်(၁၃၁)၊ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
စတင်တည်ထောင်သည့်နှစ် - ၁၉၅၃ ခု
တည်နေရာ - ၂၀x၂၁လမ်းကြား၊ (၆၆)လမ်း၊ မန္တလေးမြို့
Copyright © 2013. All rights reserved. Developed by Bagan Innovation Technology.